Tena Nihevitra Ny Japoney Sasany Fa Ho Azon’ I Haruki Murakami Ihany Ny Loka Nobel Amin’ity Indray Mitoraka Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2016 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, বাংলা, русский, English
Fanazavana: “Hahazo ny Loka Nobel ve i Haruki Murakami ?” — Loka Nobel literatiora izay omena izao hariva izao. Pikantsary avy amin'ny ANN News fantsona YouTube ofisialy.
Tamin'ny 13 Oktobra, lasan'ilay mpihira sady mpitendry mozika Amerikana Bob Dylan ” ny Loka Nobel Literatiora 2016 noho izy namorona teny poetika vaovao tao anatin'ny hira nentim-paharazana Amerikana mahafinaritra “.
Raha maro ny olona nankalaza ny zava-bitan'i Bob Dylan manerana izao tontolo izao [mg], diso fanantenana tamin'ny vaovao kosa ny sasany ao Japana. Maro no nieritreritra fa handresy ihany amin'ity taona ity ilay mpanoratra tantara Japoney Haruki Murakami.
Iray amin'ireo mpanoratra malaza indrindra miasa ao Japana amin'izao fotoana izao i Haruki Murakami. Isaky ny mamoaka boky vaovao i Murakami, dia lasa hetsika ara-kolontsaina iray lehibe ao Japana izany:
Lasa maro mpanaraka manerantany i Murakami noho ny fandikana ireo tantara sy ireo tantara fohy tamin'ny tenim-pirenena 50 samy hafa fara fahakeliny. Nahazo loka fanta-daza maro tao Japana sy tany ivelany i Murakami, ka ny Loka Nobel Literatiora no mety ho zava-bita farany mba hisalorany amin'ilay asa miavaka .
Talohan'ny fanambaran'ny Ivontoerana Nobel tamin'ny 13 Oktobra, nitatitra ny tambajotra Fahitalavitra Japoney ANN fa nahazo ny laharana favori voalohany tamin'ny fahazoana ny loka i Murakami ary tsy tao anatin'ny lisitr'ireo tafakatra famaranana akory i Bob Dylan:
Tati-baovao tao amin'ny fahitalavitra Japoney momba ny mety ho filaharan'i Haruki Murakami mahazo ny loka Nobel. Sary avy amin'ny ANN News fantsona YouTube ofisialy.
Natao tamin'ny fomba feno fanajana ao Japana ny Loka Nobel, izay toerana manana ny isan'ny mpandresy faharoa betsaka indrindra mahazo ny loka Nobel aorian'i Etazonia.
Ny fotoana nanambarana ny #LokaNobelLiteratiora . Nanakoako ny efitrano ny fahagagana sy ny fifaliana. Natao tamin'ny teny soedoa (sic) ny fanambarana voalohany, ka fantatra ilay anarana hoe “Bob Dylan”.